Raharaha 26 janoary : Trosa miandry an - dRajoelina -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha 26 janoary : Trosa miandry an – dRajoelina
25/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Rahampitso no feno 8 taona, ilay “alatsinainy mainty” na ny “raharaha 26 Janoary 2009”. Nihoatra ny 500 ny ain’olona nafoy nandritra izany. Tompon’antoka feno tamin’izany ny filohan’ny Hat teo aloha Andry Rajoelina, satria dia nandritry ny fitarihany olona hidina an-dalambe no nitrangan’ny faty olona sy doro trano ary fandrobana ka nitarika ny firenena nilatsaka tany anaty fahantrana sy fahaverezan’asa mandrake ankehitriny.
Tamin’io fotoana io indrindra no nidina an-dalambe nitondra an’ireo voalaza fa “mpitolona” i Andry Rajoelina. Nomeny “tsodrano” mihitsy ireo mpitolona ireo. “Mitsodrano anareo aho”, hoy izy. Voarakitra anatin’ny haino aman-jery rehetra izay teniny izay. Fotoana fohy taorian’io no nirehitra ny haino aman-jerin’ny filoha teo aloha teny Anosipatrana. May tamin’io koa ny haino aman-jery Rnm sy Tvm. Vetivety dia nirehitra sy voaroba ihany koa ny Magro rehetra teto an-drenivohitra.
Nandritry ny fandrobana ny Magro teny Tanjombato kosa no nahitana faty olona betsaka indrindra. Manginy fotsiny ireo main’ny herinaratra nihantona teny amin’ny tamboho, ny nianjeran’ny vary sy ny koba tamin’ny gony.
Ny alin’io “alatsinainy mainty” io ihany koa dia marobe ny faty olona tao amin’ny tranombarotra “Trading Center” teo Analakely. Betsaka ny olona taraiky tao anatiny ka dia maty kilan’ny afo tao. Miisa 20 ny fatin’olona nikainkona hita avy hatrany. Na efa valo taona aty aoriana aza dia tsy tafarina intsony io toerana fivarotana lamaody io. Nandritry ny Tetezamita iray manontolo ( 5 taona) dia tsy nihetsika mihitsy io dosie “ 26 janoary” io. Mazava be ny antony satria manohintohina an’ireo mpitondra tamin’izany.
Telo taona aty aorian’ny Tetezamita kosa, dia inoana fa mety hivoatra ny toe-draharaha. Tsy miafina fa miriaria eny ireo tompon’antoka tamin’izany.
Mbola “trosa” goavana eo ambony lohan’ny filohan’ny Hat tamin’izany (Andry Rajoelina) io raharaha io. Raha misokatra mantsy ny fanadihadiana, dia mazava be fa izy no mpandray anjara fototra tamin’io “alatsinainy mainty” io. Tamin’ny fotoana nidinany an-dalambe no niteraka ny raharaha 26 Janoary. Tsy azony lavina velively izany.